Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Zlatan Ibrahimovic nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
LB na-enye akụkọ zuru ezu akụkọ akụkọ football nke maara aha "Ibracadabra".
Anyị Zlatan Ibrahimovic Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu gụnyere akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Swedish Legend Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe.
Obi abụọ adịghị ya, a maara ya dị ka onye ọkpụkpọ na-enye ọtụtụ ntụrụndụ dị na ma na mpụga pitch. Na pitch, a maara ya dị ka ihe mgbaru ọsọ-isi ihe igwe dị ka onye na-ese okwu (na-apụ-na-pitch).
Zlatan Ibrahimovic Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Zlatan Ibrahimovic na October 3, 1981, na Malmö, Sweden, na nna Bosnia na nne Croat bụ ndị ọ bụghị obi ụtọ lụrụ di na nwunye.
Alụmdi na nwunye ha na-agbanwe agbanwe dịgidere naanị afọ abụọ. Mgbe ọ dị afọ abụọ, Zlatan hụrụ ịgba alụkwaghịm nke nne na nna ya nke bịara n'ihi ọgụ mgbe niile, nleghara anya ụmụaka, na mmegbu.
Dika iwu ndi Sweden gbara alụkwaghịm, Jurka Gravić (nne Zlatan) nwere ohere ijide nwa ya nwoke.
Nke a bụ mmalite nke ihe a kpọrọ a 'Ahụmahụ siri ike nwata' maka nwata nwoke.
Dị ka Zlatan si kwuo, 'Ibi na nne ya na ilele nne na nna ohuru na-abia n'ime ndu ya bu ezigbo ihe mgbu '.
Zlatan Ibrahimovic Biography - Ngwaahịa nke ụlọ gbajiri agbaji:
Zlatan Ibrahimovic gosipụtara ọrịa emaciation n'ihi ịgba alụkwaghịm nke nne na nna ya na nna nna ya.
N’oge ụfọdụ, ọ gabigara oke mbibi na mperi dị n’adighi mma n’ihi ọghọm nke akwara abụba dị n’anwụ.
O were obere oge tupu Zlatan anabatara otu nne na nna nanị nne ma ọ bụ nna. Nmeghachi zuru oke mgbe e kwere ka ọ maliteghachi nkwurịta okwu na nna ya nke ọ hụrụ n'anya karịa mama ya.
Nye Zlatan, e nweela akụkọ banyere nna ya. N'otu oge, mgbe ha nwere obere ego, Sefik Ibrahimovic jisiri ike ịzụta Zlatan otu ihe ndina si Ikea ma ha enweghị ike imeli ebubo ahụ.
Nna Zlatan Ibrahimovic (Sefik Ibrahimovic).
Anyị buuru ya laa n'etiti anyị. Ọ dị egwu ihe anyị mere. Mụ na nne m nwere oge mana mụ na nna m biri n'ezie. Otu oge o nyere ụgwọ ọnwa ya niile ka m were ya lekọta ”
Sefik Ibrahimovic ọbụlagodi mgbe ya na nwunye ya kewapụrụ onwe ya iwe site na ncheta agha Balkan. O nweghi ike ighapu onyonyo nke obodo ya na Bosnia nke ndi agha Serbia na-emegbu.
Ọnụnọ nna a na-agbawa obi mere ka Zlatan Ibrahimovic nwee ndụ owu na-ama na iwe.
Dị ka Zlatan si kwuo ya, enweghị Nna nke kachasị njọ omume igwe mmadụ na-eme n'oge m bụ nwata.
Zlatan Ibrahimovic Bio - Mmalite nke Isi Ike:
Maka Zlatan Ibrahimovic, itolite siri ike. Dị ka nwa nke onye nlekọta Bosnian na onye na-ehicha Croatian, bụ ndị kewara mgbe ọ dị afọ abụọ, Ibrahimovic diri ịjụ.
Sergej Milinkovic-Savic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Mmetụta ọjọọ nke ụlọ mere ka Zlatan Ibrahimovic zụlite omume isi ike na mkpebi siri ike ịghara ịgbanwe agwa ọjọọ n'agbanyeghị ezi ihe kpatara ịme ya.
Dị ka Zlatan si kwuo, "Ọ dịghị onye na-ajụ ịjụ m, olee otú ụbọchị m si bụrụ? ".
Mana nwata nwoke nwere nsogbu na nnukwu imi nwetara nkasi obi na ndi si na ndi agbata obi ya na ndi obodo ndi kwabatara ebe ndi ojoo ha na-abanye na mgbasa ozi.
Dusan Tadic Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Ngwakọta ya na ndị hoodlums mepụtara omume ọhụrụ nke hụrụ ụdị egbugbu mbụ ya. Oge a bụ oge ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, ịkpa nganga na ibi ndụ iwe nyere ya.
Ọ tolitere ịbụ onye 'PettyThief' nwere ọpụrụiche na-ezu ohi igwe kwụ otu ebe na swiiti n'ụlọ ahịa.
N'ajụjụ ọnụ, Zlatan kwuru, “Mgbe anyị chọrọ ihe maka onwe anyị, naanị ihe anyị na-eme bụ ịga ụlọ ahịa na izu ohi. Mụ na ọgba tum tum ahụ nwere mmekọrịta dị mma karịsịa. ”
Zlatan, taa na-akọwa okporo ámá Rosengard dị ka "Paradaịs", N'oge na-adịbeghị anya, o kwusiri ike na ọ na-enwe obi ụtọ n'ụlọ ya na agbata obi ya karịa na ụlọ nkwari akụ kachasị ọnụ n'ụwa, ọ bụ ezie na ọ dịghị echefu na ọ bụkwa ebe dị ize ndụ.
Dị ka Zlatan si kwuo, 'Football napụtara m. N'oge ụfọdụ, ọ bụ ihe niile mmanya na ọgwụ ọjọọ na Rosengard.
Obi dị m ụtọ na m ka na-agbara ha ọsọ. M dị iche n'ihi na enwere m ihe akaebe dị ndụ na nke ahụ.
Ya mere, ozi m nye nwa na-enweghị nna, onye nwere mmetụta dị iche iche, ma ọ bụ ọchichọ, bụ na ọ bụrụ na ị kwenyere n'onwe gị ị ga-eme ya. E nwere mgbe niile. Ihe niile na-adabere na gị. "
Zlatan Ibrahimovic Biography - Ọrụ Nlekọta Oge Ochie:
Mgbe ọ natara akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ abụọ, Ibrahimović malitere ịgba bọl mgbe ọ dị afọ isii. Ọ kụziiri onwe ya ka ọ kpọọ bọl na gravel gravel ochie n'èzí ụlọ nne ya.
Na obere uzuzu uzuzu dị na ala, Ibrahimovic na ndị enyi ya gbalịrị aghụghọ na flicks, spins na gbaa.
Enweghị ohere pụtara na ị ga-adị ngwa isi na ụkwụ gị. Zlatan chọtara ọkpụkpọ ya mgbe usoro ọzụzụ siri ike.
Dị ka Zlatan si kwuo, "Mgbe anyị gbara bọọlụ na Rosengard, ọ bụ maka itinye bọọlụ n'etiti ụkwụ ndị mmadụ, ime ihe dị iche iche,"
ọ na-agbakwụnye. “Mgbe aghụghọ ọ bụla ndị mmadụ dị ka 'oohhh' 'eeeyy'. Ọ bụ ihe niile banyere onye nwere nsogbu kacha sie ike, aghụghọ kachasị mma, njem craziest. Ahụrụ m ya n'anya. ”
Mgbe ọ tụgharịrị, proks chavel ochie a na-emezigharị kpamkpam, ya na ụlọ nchara nke Nike na-akwado.
O chetara na ọ na-eleta otu onye ibe ya mgbe ọ bụ 13 afọ. Ị mgbe ọ bụ afọ 15, ọ họọrọ ịrụ ọrụ na Malmo kama ịkụ bọl. Ekwenyere ya imegide echiche ahụ site n'aka onye nchịkwa ya.
Ibrahimovic chọpụtakwara ọnụ ụzọ ka ọ na-anwa ịchụso ọrụ dịka ndị ịgba egwu egwuregwu.
Ọbụna mgbe ọ sonyeere ọgbakọ ọkachamara nke obodo ahụ, Malmo FF, mgbe ọ dị afọ 17, nne na nna nke otu n'ime ndị otu egwuregwu rịọrọ ka a chụpụ ya na klọb ahụ.
Nke a bụ n'ihi Zlatan isi-gbuo onye otu ya nke na-abụ naanị nwa nne na nna.
Dị ka Zlatan si kwuo, ”Onye ọkpụkpọ ahụ nwetara akwụkwọ ozi sitere n’aka ndị mụrụ ya wee gwa ndị mmadụ ka ha bịanye aka na ya chụpụ m na klọb ahụ mgbe m kpesịrị ya isi.
Ọ bụrụ na m nwere ike itinye onwe m n'oge ahụ taa, aga m asị onwe m 'emela nke ahụ, mana abụ m nwa okorobịa iwe'.
Ọ bụ mgbe ọ dị afọ 18 na Ọ wepụtara bọlbụ nwere ike inye ya ọdịnihu, ụzọ pụọ na nzụlite ya siri ike.
Ibrahimovic na-egbusi egbugbu ahụ na nkwojiaka na ume mgbe a jụrụ ya ma, n'oge ahụ, ọ ga-ekwere na ya nwere ike mezuo ihe ndị o nwere.
Ibrahimovic mere ọkachamara mbụ ya maka Malmö FF na 1999, wee nyere ụlọ ọgbakọ nke abụọ aka ịwụli elu n'ọkwa nke mbụ na-esote oge.
Onye na-egbu ihe 6'5 signed wee banye na ụlọ ama ama ama ama ama Dutch Dutch AFC Ajax wee kwanye ikike ya dị egwu dịka akụkụ nke otu egwuregwu abụọ na-emeri aha, ọ bụ ezie na ọ mepụtara aha dị ka onye ọkpụkpọ ọkụ.
Zlatan Ibrahimovic na-alụ ọgụ na esemokwu:
Ọ bụ ndị na-agba ọsọ nwere agwa ọjọọ na ikuku mpako nke onwe ya. Ọ bụ ya na ndị otu egwuregwu na-alụ ọgụ ma bụrụ ihe nro maka otu njikwa (Pep Guardiola).
N’agbanyeghi na onyinye di egwu, Zlatan na ndi gbara ya gburu gburu ya n’ebe nile o gwuru.
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi nganga ya kamakwa ọ laghachiri n'oge nwata ya nwere nsogbu ebe o gosipụtara iwe ọkụ nke ọ na-agba mbọ ịnwe n'oge ụfọdụ.
Zlatan nwere ọgụ dị elu na onye otu ya na Rafael van der Vaart ebe ọ merụrụ onye Dutch ahụ n'oge egwuregwu mba ụwa.
Oguchi Onyewu gbara ya na Zlatan na agbaji agbaji.
Ibrahimovic, eriri ojii dị na Taekwondo nwere mmetụta maka ịgba ndị otu ya, bịara ịfụ na muscular USA mba Onyewu mgbe Swede mere ihe egwu dị egwu.
O were ndị otu egwuregwu iri na ndị nkuzi ikewapụ ha abụọ n'ibe ibe ha ọkpọ.
Zlatan dere ọtụtụ ihe banyere ihe ahụ mere na akụkọ ọdịnala ya 'Abụ m Zlatan Ibrahimovic'.
"M sonyeere AC Milan na 2010 ma otu nnukwu egwuregwu anyị na-abịaru nso. The Milan derby megide Inter, bụ onye ndị Fans kachasị mmasị - ndị Ultras - na-akpọ m asị. "
"N'elu nke ahụ, enwere m nsogbu na Oguchi Onyewu, onye otu n'ime ìgwè m. Ọ bụ onye Amerịka ka ụlọ, ọ gwara m otu onye òtù ọlụlụ: Otu ihe dị njọ agaghị eme. M na-eche ya. "
Zlatan nyere nkọwa zuru ezu nke onye ọkwọ ụgbọala egwuregwu Charlton na nkwupụta ya ọzọ, na-esote ya kọwaa ọgụ ahụ dum.
'Onyewu dị ka ọkpọ ọkpọ dị arọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6ft 5in ma ọ dị arọ karịa nkume 15, mana ọ nweghị ike ijide m.
O boro m ebubo na m na-ekwu okwu n'eziokwu, ma nke ahụ abụghị eziokwu. Ndị mmadụ na-agwa m okwu. Anụla m ọtụtụ ihe ọtụtụ afọ: 'F ****** gypsy', ihe gbasara mama m - ihe niile ahụ. Ana m emegwara ahụ m, ọ bụghị ikwu ya. ”
“Agwara m Onyewu na anaghị m ekpofu okwu, mana ọ gara n’ihu. Ọ were mkpịsị aka ya kpuchie m. O meziri ya ọzọ. Ahụrụ m uhie. Ekwughị m ihe ọ bụla, ọ bụghị okwu.
Nke a ga - achọpụta etu m si esi ekwu okwu! Oge ọzọ ọ nwetara bọọlụ na ọzụzụ; M gbagara ya wee wụpụ ụkwụ m na studs n'ihu - ụdị ihe kachasị njọ. ”
“Ma ọ hụrụ m wee wụpụ site n’ụzọ. Ka anyị abụọ dara n’ala, ihe mbụ gbatara m n’obi bụ: ‘S ** t! Agbaghara m!
Ka m biliri pụọ pụọ enwere m mmetụta ịkụ aka n ’ubu m. Ọ bụghị ezigbo echiche, Oguchi Onyewu. ”
“Agbụrụ m ya isi, anyị wee ferịta onwe anyị. Anyi choro igbari ibe anyi ukwu na ukwu.
Ọ jọgburu onwe ya. Anyị nọ na-agagharị, na-akụ ma na-ehulata ibe anyị. Anyị bụ ndị nzuzu na oke iwe - ọ dị ka ndụ na ọnwụ. ”
Ozugbo ihe dajuru ndị egwuregwu ahụ aka, ọ bụ mgbe e mesịrị ka Ibrahimovic chọpụtara na ọ tara ahụhụ ọgịrịga.
O doro anya na nke a abụghị oge mbụ ya na onye otu egwuregwu nwere esemokwu, mana nke a nwere ike ịbụ oge mbụ ọ merụrụ ahụ n'otu oge.
“Emechaa, ihe dị ịtụnanya mere. Onyewu malitere iji anya mmiri na-ekpegara Chineke ekpere, na-eme akara nke obe.
Nke a dị ka mkpasu iwe, ewe wee iwe karịa. Ndị otu m kwụsịrị m, echere m na nke ahụ bụ ihe dị mma.
Ọ nwere ike bụrụ ihe jọgburu onwe ya. Oge niile, m na-eche: 'S ***, obi m na-afụ ụfụ,' yabụ anyị mere ka elele ya. M ga-agbaji ọgịrịga n'ọgụ ahụ. ”
'Ọ bụghị oge mbụ mụ na otu onye òtù ọlụlụ nwere esemokwu.'
Mkparịta ụka ya bụ otu ihe kpatara ya ji egwuri egwu n'ọtụtụ klọb, nakwa otu ihe kpatara ụfọdụ ndị egwuregwu na ndị na-agbapụ abụghị onye kachasị akwado ya.
Mmalite nke 'Zlatan':
Iji Zlatan (Nkọwa Okwu Nkọwa Okwu na Nkwupụta Okwu).
Na-egwu maka otu mpaghara ya FBK Balkan mgbe ọ dị afọ 10, Zlatan wetara dị ka ọkara nke abụọ ka ndị otu ya na-aga 5-0.
Onye na-eto eto bụ Ibrahimovic ga-agbanye egwuregwu ahụ n'isi ya, na-atụle ihe dị egwu eight, nke ahụ ziri ezi, asatọ Nkeji nke abụọ iji merie egwuregwu 8-5.
Nke a bụ oge aha "Zlatan" a mụrụ ya. N'oge na-adịghị anya, ụwa weere ndị na-eto eto Swedish ndị nwere nkà dị egwu na nwata.
Zlatan Ibrahimovic Nwunye ka o buru - Helena Segar na umuaka:
Zlatan Ibrahimovic Lovehụnanya Ndụ (Mmekọrịta Akụkọ).
Dị ka n'oge edere Biography, Zlatan ka na-alụbeghị. Ọ bụ ezie na ya na enyi nwanyị ya bụ Helena Segar nọ na-enwe mmekọrịta dị ogologo oge.
Helena bụbu onye nlereanya Sweden. Ọbụna tupu ya na Helena Segar enwe mmekọrịta, Zlatan enweghị ịhụnanya. Ha nwere ụmụ abụọ. Ya na Helena na ụmụ ya bi ugbu a na Paris. Helena nwere ike ịghọ nwunye Zlatan n'ọdịnihu dị nso.
Zlatan Ibrahimovic Tatoos na Pụtara:
Na Feb 14, 2015, na egwuregwu megide "SM Caen" na isi ihe mgbaru ọsọ, o yipụrụ uwe elu ya iji gosipụta egbugbu nke aha 50 ndị mmadụ gburugburu ụwa, na-arịa agụụ. Omume a bụ maka nkwado nke “UN Food Programme.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Ibrahimovic nwere ọtụtụ egbugbu, mana o nwere ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị nwere nkọwa na-enye anyị nghọta na "The Zlatan".
O nwere dragon buru ibu nke na-acha uhie uhie n’akuku ya nke kwesiri ibu ihe nlere anya dika onye agha ya, n’otu aka ahu, o nwere azu Koi n’ubu aka ekpe ya bu azu nke na-egwu mmiri n’elu ma na-aga “megide ọka”.
O nwekwara ise ise nke Deva Yantra, ihe oyiyi Buddha nke na-anọchite anya ihe ndị a kwenyere na ha na-alụso ọrịa ọgụ.
Zlatan Ibrahimovic Tatoo (Nleghachi azụ na HD).
A mụrụ ndị nne na nna ya na nwanne ya na aka ya, ọ na-enwekwa ụbọchị ọmụmụ ụmụ ya na nna nna ya n'aka nri ya na nne ya n'aka ekpe ya.
Zlatan Ibrahimovic Tatoo Aha.
Akara ole na ole ndị ọzọ bụ mkpụrụokwu "naanị chi nwere ike ikpe m ikpe" (abụ Tupac) na ọgịrịga ya, yana ọfụma nke obi na klọb na ngịga aka nri ya nke kwesiri ịchọọ ihu ọma.
Zlatan Ibrahimovic Biography - Nna-ukwu Na-adịghị Egwu:
Ihe na-adọrọ mmasị na Ibrahimovic site na enyi nwata: 'M ka mma karịa ezigbo enyi m Zlatan… ugbu a ọ bụ kpakpando ma sụọ m afọ iri na atọ.
Ha anaghị ekwenye mgbe niile, karịsịa banyere football. 'Ekpere m Shearer anya ma kpọọ asị bọọlụ Bekee n'ihi na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu - nke ahụ bụ ihe ọ dị ka ya,' ka Flygare kwuru. 'Ọ na-ekwukarị na ọ ga-egwu intali ma ọ mere.'
Mgbe nne Flygare kpọbatara ha n'okporo ámá, ha ga-anọdụ ala n'ihe ndina ya ruo ọtụtụ awa na njedebe, na-alụ ọgụ karịa njikwa egwuregwu egwuregwu.
'Dị ka ụmụ ejima,' ka Flygare kwuru banyere mmekọrịta ha. 'Enwere m nna nke Zlatan n'ọtụtụ ụzọ, ọ na-elegide m anya, ma ọ bụ asọmpi.
Nkwenye Onwe Gị:
Gbanyụọ olulu ahụ, Zlatan ji obi ike na nkwenye onwe ya jupụta, ya mere na ọ ga-ekwukarị onwe ya na onye nke atọ "Zlatan".
Ọzọkwa, ọ na-eji aha ya eme ihe dị ka ngwaa ebe "iji Zlatan" bụ ime ihe nwere oke amamihe ma ọ bụ ikike ma ọ bụ ịchị.
Akwụkwọ Twitter ya na ajụjụ ọnụ ya bụ ihe ị ga-ahụ ma dọta uche dị ka ihe ndị na-eme n'ọhịa, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọkà ihe ọmụma oge ụfọdụ na ụfọdụ n'ime okwu ya.
Zlatan Ibrahimovic Net thtọ:
Zlatan Ibrahimović nwere ụgbụ dị mkpa $ 160. A forward for Sweden national team, Ibrahimović enweta $ 35 kwa afọ na ụgwọ.
Movekwaga na Premier League na Manchester United maka oge 2016-17. Mgbe ya na Nike kwurịtara oge, ọ laghachiri n'okpuru nkwekọrịta ruru nde $ 3 a na-akọ kwa afọ site na 2019.
Zlatan Ibrahimovic Iwu Iwu:
Ọ nọ ọzọ na iwu na-ezighi ezi mgbe ọ natara kaadị uhie maka ịkụ ụra Salcatore Aroniaca na bọọlụ na-enweghị goolu megide "Napoli." Onye ọka ikpe egwuregwu Gianpaolo Tosel machibidoro ya iwu maka egwuregwu atọ.
Mmeri Mmeri & Nkwanye Udo:
Dị ka Zlatan si kwuo, Ọ na-akọwa, sị: “M na-etinyekarị onwe m n’ọnọdụ nke abụọ - ọ na-amasị m ime ka ndị ọzọ nwee obi ụtọ.
“Ebe ọ bụla m gwuru, emeriwo m (aha itoolu itoolu n’oge 10 gara aga na klọb ise). Mana enwere m afọ ojuju naanị ma ọ bụrụ na ndị otu m, ndị Fans, mmadụ niile nwere obi ụtọ. Enwere m nnukwu obi. ”
Zlatan egosila na ọ dị egwu n'agbanyeghị agbanyeghị uwe ọ na-eyi site na isi na asọmpi kachasị ukwuu nke Europe na klọb dị iche iche isii. Ọ bụ onye nchịkwa ihe mgbaru ọsọ na-enweghị obi ụtọ nke nwere ike igwu egwu n'okpuru ndị ọrụ dị iche iche.
Nkwanye forgwù Maka Akụkọ Ochie Brazil:
Ndị dike ya abụghị ndị Sweden, n'agbanyeghị na ha mechara nke atọ na 1994 World Cup. Naanị ya nwere anya maka mgbukepụ nke Brazil, na-amụ ihe ọ masịrị Ronaldo Nazario de Lima na Ronaldinho. Ọ na-elele ọtụtụ vidiyo na etu esi eme ha.
Dị ka Zlatan si kwuo, Ọ sịrị: “Anaghị m ele Sweden anya n’oge ahụ, anaghị m ahụ ya anya. Ahụrụ m Brazil n'anya n'ihi na ha dị iche.
Ha metụrụ bọl ahụ aka n'ụzọ dị iche, dị ka hockey ubi ebe ị na-adọrọ bọl ahụ. Nke ahụ bụ anwansi ma ọ dị m iche na ihe ọ bụla m hụtụrụla. ”
Zlatan Ibrahimovic Bio - Okwu na Pep Guadiola:
Na-egwu ọkụ? Ibrahimovic atụghị ụjọ ikwupụta echiche ya ma katọọ ya Pep Guardiola. N'ezie, Zlatan boro onye isi nchịkwa mbụ Pep Guardiola ebubo na ọ bụ "onye ụjọ" na "enweghị bọọlụ".
Nrọ ya ịkwaga Barcelona kwụsịrị na ọdachi na njedebe kpamkpam na mmekọrịta ya na Guardiola.
Dị ka ya si kwuo, Enwere m nrọ ịbanye na Barcelona mana ugbu a, echere m na ị ga-echerịrị nrọ gị kama ime ka ha mezuo n'ihi na ọ nwere ike ibibi m.
N'ime ọnwa ole na ole mbụ na Spen, ndụ gara nke ọma, mana Guardiola kwụsịrị ikwurịta okwu. "Amabeghị m ihe kpatara ya, enwere m ike," Ibrahimovic kwuru.
“Agbalịrị m ịkpọtụrụ ya - mana ọ chọghị ịgwa m okwu, ọ na-ezere m. M banyere n’ime ụlọ, ọ nọ ọdụ na-a hisụ kọfị ya.
Ma o biliri, emechaghị kọfị ya. Echere m: 'Ọ bụghị m bụ nsogbu, ọ bụ ya bụ nsogbu.' Mana enweghi okwu, azịza, ihe ọ bụla.
Nsogbu Ibrahimovic kwụsịrị mgbe ya na Villarreal gachara. “M tikuru Guardiola, m na-eti mkpu na o nweghị bọọlụ na ọ bụ ihe nzuzu na ọ gwaghị onye ọkpụkpọ ya okwu. Apụrụ m otu igbe n'ihu ya ma ziga ihe n'ala.
Echiche m bụ iwe iwe ka m wee nwee ike ịgwa m okwu. Ma ọ dịghị ihe. O welitere igbe ahụ, tinye ya ọzọ wee pụọ n'ime ụlọ ahụ.
The Zlatan Dictionary Ngwaọrụ Ndebanye aha:
Mgbe ị na-enyocha mkparịta ụka ole na ole na onye na-egbu Swedish ị ga-ahụ otu ihe ngwa ngwa; ọ na-amasị ụda nke aha aka ya.
Ya mere n'eziokwu, na o nwere ya ahaahia na 2003. Na "Zlatan" na "Zlatan Ibrahimovic" ahaahia, ọ pụtara na o nwere ikike ikikere maka aha maka ngwaahịa dịka uwe, akpụkpọ ụkwụ na ihe egwuregwu.
Na France, okwu ahụ 'zlataner' ugbu a pụtara n'ihu ọha “Ịzọpịa”. N'ọnwa Disemba, Swedish Language Council debara aha ngwaa ahụ 'zlatan', nke pụtara ime ihe na-ama jijiji ma ọ bụ na-egbuke egbuke.
Zlatan Ibrahimovic karịrị naanị ndị ịgba ọsọ ụkwụ, ọ bụ okwu, ụzọ omume, ụzọ ndụ.
Zlatan Ibrahimovic Bio - The Taekwondo Master:
N'ịbụ onye ọkpụkpọ na onye ọ bụ, Ibrahimovic hụrụ onwe ya na arụmụka ole na ole ma lụọ ọgụ ma ndị mmegide na ndị otu.
Ọ bụ otu ọkpụkpọ nke ị na-achọghị ịbanye n'akụkụ na-ezighi ezi, agbanyeghị, ebe ọ ghọrọ eriri ojii na Taekwondo mgbe ọ dị afọ 17 na obodo ya bụ Malmo.
Ọ natara belt ojii na-asọpụrụ site n'aka ndị otu ndị Taekwondo nke Italia. Ikike agha ya na-enyere ya aka na olulu ahụ, ebe ọ nwere ikike dị egwu maka ịmị acrobatic na ịgba ọsọ n'agbanyeghị nha ya, nke juru ụwa anya ọtụtụ oge (yana England nọ na-anata otu ebumnuche pụrụ iche).
Zlatan Ibrahimovic Auto Biography:
Ụda bọl ahụ tọhapụrụ akụkọ ya, Abụ m Zlatan Ibrahimovic, na njedebe nke 2011.
Ihe ncheta kacha mma nyere nkọwa doro anya banyere nsogbu nwatakịrị nke Ibrahimovic na esemokwu ya na Guardiola na ndị egwuregwu ndị ọzọ, e bipụtara ụdị Bekee na Septemba 2013.
Bọchị gbanwee: Eprel 20, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 8, 2021